Fantaro i Inaciu Galán, mpikatroka ho an’ny fiteny Astôriàna · Global Voices teny Malagasy
Fantaro i Inaciu Galán, mpikatroka ho an'ny fiteny Astôriàna
Voadika ny 04 Mey 2022 5:13 GMT
Sary an'i Inaciu Galán ary nahazoana alalana ho ampiasaina.
Anatin'ireo andiany ataonay amin'izao fotoana izao mba hanasongadinana ny asan'ireo mpikatroka mampahafantatra aty anaty habaka nomerika ireo fiteny eorôpeàna vitsy an'isa sy fitenim-paritra, tianay ny hanasongadina an'i Inaciu Galán (@inaciugalan) izay miasa ho fampiroboroboana ny fiteny astoriana avy any Astoria, ao avaratra-andrefan'i Espaina. Araka ny voalazan'ity Etnôlôgy ity, teratany manodidina ny 100 000 no miteny an'io fiteny andalam-pahaverezana io, ary 250 000 hafa mampiasa fiteny faharoa.
Rising Voices (RV): Lazao anay ny mombamomba anao sy ny asanao mifandraika amin'ny fiteny
Inaciu Galán (IG): Mpanao gazety aho sady mpampianatra ary entiko amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainako ny maha-mpikatroka ho an'ny fiteny Astôriàna sy ny zon'ireo mpiteny azy ahy. Niasa toy ny tonian-dahatsoratra aho, mpanentana fandaharana amin'ny onjam-peo sy fahitalavitra, mpanaparitaka ny fiteny Astôriàna any anatin'ireo tambajotra. Namoaka fikarohana mikasika ny tantaran'i Astôria aho.
Tamin'ny taona 2011, niaraka tamin'i Víctor Suárez, nandray anjara tamin'ny fanentanana ny Iniciativa pol Asturianu Foundation aho, fikambanana tsy miankina iray izay miasa ho amin'y fnkatoavana ny zon'ireo mpiteny Astôriàna, any anatin'ireo faritany rehetra izay misy azy ho tenindrazana. Ny 6 May – Andron'ny Literatiora Astôriàna, no hanendrena ahy ho mpikambana ao amin'ny Akademian'ny fiteny Astôriàna.
RV: Manao ahoana ny fiteninao ankehitriny, anatiny sy ivelan'ny aterineto ?
IG: Manana olana goavana ny fiteninay eo amin'ny fahatapahan'ny fiampitàny amin'ny andian-taranaka sy ny tsy fankatoavana ireo zo, saingy ao andamosiny ao, manana vondrom-piarahamonina tena mavitrika izy izay miasa mafy efa ho dimampolo taona izao mba hahazoana antoka ny fahaveloman'ilay fiteny. Tena midadasika sy miovaova ny fisiany ao anaty tambajotra sosialy, fa koa any anatin'ireo sekoly sy ny sisa.
RV: Inona avy ireo antony manosika anao hahita ny fisian'ny fiteninao any anatin'ireo habaka nomerika ?
IG: Tsy maniry ny ho lasa mpikatroka aho, saingy tsy maintsy ataoko izany noho ny sata misy ny fiteniko. Ahafahana mikitika olona maro amin'ny fomba tsotra ny tontolon'ny nomerika ary atao izany izany miaraka amin'ny fieritreretana ireo andian-taranaka tanora. Izany no antony, anatin'ireo hetsika maro izay natomboko, isian'ny PlayPresta, habaka iray hananganana sy hanaparitahana ireo habaka natao ho an'ny mpanao YouTube sy mpanao podcast amin'y fiteny Astôriàna.
RV: Farito ny sasantsasany amin'ireo fanamby izay manakana ny fiteninao tsy ampiasaina feno ety amin'ny aterineto
IG: Ny tsy fahampian'ny fankatoavana ilay fiteny dia midika fa tsy fiteny fivoizan-javatra izy ho an'ireo tambajotra sosialy lehibe. Na dia anananay aza ny fitaovana ara-kajimirindra marobe manana loharano malalaka amin'ny fiteny Astôtiàna, noho ny asa maimaim-poana ataon'ireo olona marobe, dia mbola lava ny lalana aleha. Ny rafitra no manefy ireo mpampiasa ny fiteny vitsy an'isa hiaina ny diglôsia (fampiasàna teny roa anaty vahoaka iray, ka ny iray ambaniana).
RV: Ho anao, inona avy ireo fepetra tokony ho raisina mba handrisihana ny tanora hanomboka hianatra ny fiteninao na hanohy hampiasa azy ?
IG: Efa ho efapolo taona izao no tany an-tsekoly ny fiteny astôriàna, saingy tamin'ny fomba an-tsitrapo sy tena mampidi-doza, no sady mandritra ora fampianarana vitsy monja sy ireo ivontoerana izay sarotra handraisana ilay taranja ary toedraharaha iray tena tsy marintoerana ho an'ireo mpampianatra izay mampianatra azy. Raha azonay faritana amin'ny ankapobeny ilay taranja no sady omena fandaharam-potoana lava kokoa, dia hanana fahafahana maro izahay. Saingy tsy ampy izany, tsy maintsy mamorona votoaty manintona ho an'ireo tanora izahay, amina endrika haino-vaky-jery, mozika, fampiharana, lalao. Mila ataonay hahalasa azy ho fiteny ilaina eo an'ny asa any aoriana, ankafizin'ireo mpiteny ary mahafalifaly ho an'ny fiainana.